Beesha caalamka oo war xasaasi ah kasoo saartay xaaladda Soomaaliya & qorshaha doorashada – Xorriya Online
Beesha caalamka oo war xasaasi ah kasoo saartay xaaladda Soomaaliya & qorshaha doorashada
Saaxiibadda caalamka ee Soomaaliya oo maanta war-saxaafadeed cusub kasoo saarey khilaafka doorashooyinka Soomaaliya ayaa baaq u diray dhinacyada muranka u dhaxeeyo.
Warka qoraalka oo nuqul kamid ah uu arkay Xorriya Online ayaa sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay isu-soo-dhowaanshiyaha Xukuumadda Waqtiga Ka dhamaadey iyo musharaxiinta.
“Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay soo dhoweynayaan sii socoshada wadahadalada 1-dii Maarso ee u dhaxeeyay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha musharaxiinta nadaxweynaha,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Sidda ku xusan qoraalka oo lagu daabacay mareegta howlgalka UN-ka ee Soomaaliya, daneeyeyaasha caalamiga ah ayaa ku boorinaya xukuumadda iyo musharaxiinta in ay sii wadaan wadaxaajoodyada.
“Kadib shirkii guusha kusoo dhammaaday ee 25-kii Febraayo, saaxiibadu waxay ka codsanayaan ra’iisul wasaaraha iyo golaha murashaxiinta madaxweynaha inay ku tallaabsadaan horumar hor leh,” ayaa la raaciyey.
Dhanka kale, beesha caalamka ayaa ugu yeertay madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyadda in ay isugu yimaadaan shir-madaxeedka la qorsheeyay in uu qabsoomo maalmaha soo aadan.
“Waxaan sidoo kale ku boorineynaa madaxda DFS iyo DGXF inay qabtaan shir-madexeedkii la qorsheeyay maalmaha soo socda si loo xaqiijiyo qorsheyaasha fulinta ee heshiiskii 17-kii Sebtember, loona soo gabagabeeyo dib u eegista soo-jeedintii guddiga farsamada ee 16-kii Febraayo si geedi-socodka doorashada uu u bilaawdo iyadoo aanay jirin dib u dhac dambe,” ayay raaciyeen.
Shirkaan waxaa iclaamiyey madaxweynaha waqtiga ka dhamaadey Farmaajo kaasoo sheegay in lagu dhameystirayo soojeedinta guddiga farsamadda ee ku saabsanaa qodobada kasoo laabtey heshiiska 17-kii September.